Documentary Fathom ilaa Premiere at Tribeca Film Festival | Waxaan ka socdaa mac
Dukumiinti fathom ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa Bandhigga Filimka ee Tribeca
Dhowr maalmood ka hor, waxaan kuu sheegnay dukumintiga soo socda ee si gaar ah ugu imaan doona adeegga fiidiyowga ee Apple: Fathoom, a dokumentari ku saabsan nibiriyada nibiriga taas oo, dhowr maalmood ka hor intaan lagu sii deynin Apple TV +, lagu soo bandhigi doono Bandhigga Filimka ee Tribeca.
Bandhigani wuxuu ku dhawaaqay barnaamijyada filimada iyo dokumentiyada ka soo qayb geli doona tartanka 2021. Si ka duwan dhacdooyinka kale ee noocan ah, Cara Cusumano, agaasimaha xafladdan iyo madaxweyne ku xigeenka barnaamijyada, ayaa sheegay in dhacdadu waxay noqon doontaa waji ka waji.
Sanad ka dib shaneemooyin xirnaa, kulanno la baajiyay, iyo wax kasta oo mala awaal ah, waxaa farxad iyo rajo leh in ugu dambeyn aan ku martiqaadno dadka reer New York guryahooda oo aan dib ugu laabanno filimada. Ku dhex milmay magaalada lafteeda, Tribeca 2021 waxay u soo bandhigi doontaa khibradaha shaashadda weyn ee gaarka u ah filim sameeyayaasha iyo dhagaystayaasha si isku mid ah, markaan dib isugu xirno, dib u qiyaaseyno oo aan dib ugu fureyno waayo-aragnimadii wadaagga ahayd ee shineemooyinka.
Bandhigga Filimka Tribeca waxay dhacdaa 9ka ilaa 20ka Juun waxaana ku jira 66 filim iyo dukumiintiyo ka socda adduunka oo dhan iyo 54 bandhigyo adduunka ah. Nidaamka xulashada ayaa la qabtay ka dib markii la falanqeeyay in ka badan 3.000 cinwaan. Dhammaan filimada la qorsheeyey inay soo baxaan sanadkii hore ayaa lagu daawan doonaa daabacaddan.
Fathom wuxuu raacayaa sheekada laba saynisyahan oo daraasad ku sameeya heesaha iyo isgaarsiinta bulshada ee nibiriyada nibiriga. Documentary-ga wuxuu raacayaa Dr. Ellen Garland iyo Dr. Michelle Fournet markay bilaabayaan safarro isbarbar socda oo cilmi baaris ah oo ay ku aadayaan qaybaha adduunka. fahmaan dhaqanka nibiriga iyo isgaarsiinta si loo muujiyo sida ay uga go'antahay geedi socodka cilmiga in jawaabo loo raadiyo aduunka inagu xeeran.
Dukumiinti fathom ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa Apple TV + soo socota Juun 25.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dukumiinti fathom ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa Bandhigga Filimka ee Tribeca
Documentary 1971: Sannadka Muusigga Wax Walba Waa Beddelay, horraantii May 21
MacOS Big Sur 11.3 RC, dib u eegista AirTags iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac